Republishing the article : As immigration reshapes Indianapolis, schools struggle to keep up - Chalkbeat Indiana
<h1>As immigration reshapes Indianapolis, schools struggle to keep up</h1> <p>Scott Elliott, Chalkbeat Indiana</p> <time>Apr 19, 12:00am EDT</time> <p>When Marium Khan, born in Pakistan, was studying to teach English asanew language, she imagined herself working overseas, teaching English to children in other countries.</p> <p>Just more thanamonth into her first job, Khan does, indeed, instruct kids from all over the world, but she does it from right here in Indianapolis at School 79 on the city’s West side.</p> <p>Khan’s experience with the steep challenge of trying to help non-native English speaking students become quickly proficient enough at English so they can learn other subjects, pass state tests and prepare foralife in the U.S. is increasingly common across central Indiana.</p> <p>These are the early days of Khan’s first job — she graduated from IUPUI in December and started at the school aboutamonth later — but already she has had to improvise. The two languages she knows fluently, Pakistan’s Urdu and India’s Hindi languages — are of no use. The 730 students who attend School 79 speak dozens of languages, but none are the ones she knows.</p> <p>“My hardest group is first-graders,” she said. “They speak so many languages and no English. Getting used to the environment is hard for them.”</p> <p>Immigration is rapidly changing Indianapolis with major effects on schools.</p> <p>Since 2006, two-thirds of Indiana schools saw an increase in the percentage of students learning English asanew language, according to demographic data for schools that reported. Marion County is the epicenter of that trend.</p> <p> Data source: Indiana Department of Education <br> Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Of <a href="#25">the 25 schools</a> in the state that have seen jumps of at least 20 percentage points of English language learners since 2006, 14 of them are in Marion County, including five schools each in Indianapolis Public Schools and Perry Township.</p> <p>Since 2001, the number of English language learners attending Marion County school districts has jumped by more than 200 percent to about 18,000. If all those students were in one school district, it would be bigger than Wayne Township, which ranks second largest of the city’s 11 school districts.</p> <p>But at the same time schools have grappled with the fast-growing need to help children learn English, the state has cut the funding that supports those programs by more than half. That’s contributed toadifficult struggle for schools to effectively serve those children and raised questions about the fairness of an accountability system that penalizes some of them without consideration for the difficult challenge they face.</p> <p>School are quickly learning they need to do things differently.</p> <p>Perry Township, for example, has had to adapt to serveafast-growing community of Burmese refugees. IPS has long servedalarge number of Hispanic students with mixed success. But with the number of students speakingadifferent language at home — and not just Spanish — growing fast, district officials are embarking on an effort to rethink their approach to teaching them.</p> <p>There is no more dramatic example in the state of swift growth of children learning English than IPS School 79. It also happens to be Indiana’s most successful school when it comes to helping those children pass state tests.</p> <p> Data source: Indiana Department of Education <br> Credits: Sarah Glen/Chalkbeat <strong>Teaching differently for better results</strong>By the time she was named School 79’s principal in 2005, Joyce Akridge knew her neighborhood was changing.</p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19844731/79.gif"><figcaption>Credits: Sarah Glen/Chalkbeat</figcaption></figure><p>She had seen it before.</p> <p>When Akridge started her teaching career at School 79 more than 40 years ago, she moved to what was thenamostly white neighborhood and never left. Her own children attended the school — sometimes they were among justafew black faces in what was thenamostly white school.</p> <p>When she returned as principal, the school had shifted toamostly black student body, but there were hardly any students learning English — less than3percent of the school. She didn’t have any specialists in language learning assigned to the school.</p> <p>But everything was about to change again — and fast.</p> <p> Data source: Indiana Department of Education <br> Credits: Sarah Glen/Chalkbeat By the end of her second year, 30 percent of the students needed to learn to speak English, and Akridge knew she needed help. Along withacore group of teachers, she visited other schools with large numbers of English language learners and started classwork at IUPUI that led toacertification as asaspecialist in teaching children to learn English.</p> <p>She is still the only IPS principal with that credential.</p> <p>“I didn’t see it asaproblem,” she said. “I saw it asagroup of students I wanted to reach. If you give people even four or five good best practices they can use, they will see progress and will want to learn more things they can do for the students.”</p> <p>Akridge and her team began to employaseries of small techniques to help children learn English. On example: they labeled lots of items in the classroom with their English names on Post-It notes, such as chairs, tables and the board. Akridge recognized learninganew language wasahuge task that required extra time, so she tried to find ways to squeeze in more learning. Even in the lunchroom.</p> <p>After kids get their food and start eating, Akridge appears most days for what seems like play time when the principal takesamicrophone and leads them in fun activities like clapping and call-and-response. But really it’s stealth learning. The clapping isamini-lesson in pattern recognition. The questions are about vocabulary words.</p> <p>“When I was going to school, learning wasawater hose,” she said. “You just spray, and everybody was expected to get in the stream and learn. Now it’s an oscillating spray. Some children need to be wateredalittle more.”</p> <p>Back in 2006, the school was struggling — it had been rated an F for two years. But as the school has swelled with language learners — they now make up more than half the school — it’s actually seen its state test scores rise. This is School 79’s fifth straight year rated an A by the state.</p> <p>But it doesn’t come easy.</p> <p>For example, Khan teachesaspecial class for “newcomers:” immigrants who arrive at the school mid-year knowing little or no English. Onarecent Friday morning, she instructed six first-graders in the English alphabet and simple words like “we,” “the” and “am” for 90 minutes. They came from six different countries on three continents: Africa, South America and Asia.</p> <p>“I’ve never worked with so many different students from so many places,” Khan said. “You don’t know what they are saying. You have to start from the bottom with alphabet and phonics.”</p> <p>The newcomers class is one of many innovations Akridge and her staff have instituted to try to help immigrant students adapt to life in the U.S. A handful of techniques used by schools that have had success with English language learners — from sophisticated ideas like targeted use of test data to the most simple acts like smiling at the children — seem to help.</p> <p>But not every school adapts as well as School 79 has.</p> <p><strong>Are English learners ‘slipping through the cracks’?</strong>For many schools, floods of immigrant children speaking an array of languages have left children confused, teachers frustrated, test scores falling and even labeled some traditionally high-scoring schools with F grades.</p> <p>Of the 25 Indiana schools with the biggest jumps in the percentage of students learning English since 2006, 13 of them have either seen their A-to-F grades drop or stagnate as that percentage has grown.</p> <p>Schools with large numbers of students learning English faceatriple challenge: they must help those kids learn to speak and write English well, adapt toanew culture as they gradually begin to feel more like Americans and prepare academically for college or careers.</p> <p>But advocates for immigrant communities fear non-native English speakers are slipping through the cracks.</p> <p>Children learning English asanew language have been pushed over the last decade to adapt more quickly and are expected to take ISTEP sooner — in many cases, before they have learned enough language to really understand what’s being asked of them. Indiana requires all English language learners to take the ISTEP math test no matter how recently they have arrived from their home countries. They getaone-year reprieve before they have to take the English test.</p> <p>For many of them, that’s simply not enough time to learn English well enough for the exams to truly measure what they know, Akridge said.</p> <p>“I think we need to acknowledge what is truth: it takes three to five years to learnalanguage,” she said.</p> <p>State officials say their hands are tied by the federal No Child Left Behind Act, which required an overhaul of how Indiana tested English language learners in 2007 and resulted in the stricter testing timelines.</p> <p>The federal law was designed, in part, to incentivize schools to spend more time and attention on children at risk for failure. Schools have responded to the pressure to get those kids to pass tests by assigning more language specialists.</p> <p>Washington Township’s Nora Elementary School, also ranked among the top 25 schools in the state for growth of it English language learner enrollment, now has three teachers of English asanew language and five aides to supplement classroom learning for its 705 students. That’s twice as many as the school had five years ago. School 79 hasastaff of nine teachers and aides who specialize in teaching English asanew language for is 734 students.</p> <p>But that costs money, which hasn’t accompanied the federal and state mandates.</p> <p><strong>As immigration grew, funding for English learning shrunk</strong>In the case of Indiana, in fact, the quite the opposite has occurred: the legislature has slashed extra aid to support English language learning programs at the very moment when schools are struggling with explosive growth of children who need them.</p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839907/seriespromo.jpg"></figure><p>The state currently pays just $87 per student in extra aid to support English language learners, down from about twice as muchadecade ago. It simply isn’t enough money to support the titanic effort of schools like School 79 or Nora Elementary School, educators say.</p> <p>The schools must not only teach children English plus their other subjects, they also must help their kids adapt to the bewildering change of moving to America.</p> <p>Sometimes, unwavering requirements — like those for testing — can get in the way.</p> <p>Shawn Schlepp,afifth grade teacher at Nora, recalls how giving one of her students the ISTEP math test just days after moving to the U.S. erodedatentative trust the two had begun to build.</p> <p>“She was sitting at this table in this room, and she picked out the numbers from the first problem and wrote them down onapiece of paper,” Schlepp recalled. “She looked at me and gestured. She just wanted to know what to do. Add? Subtract? But I wasn’t allowed to tell her.”</p> <p>Afterafew minutes, the girl began to cry, Schlepp said. This heartwrenching scene is replayed many times at schools with lots of immigrant students.</p> <p>But there is hope even in those difficult moments, asaSchool 79 story from Akridge demonstrates.</p> <p>It wasaFrench-speaking student from Africa who also was plopped in front of the ISTEP math test on his very first day at School 79, Akridge recalled. He also quickly became frustrated and dissolved into tears.</p> <p>But soon after, Akridge said, the boy began to adapt with stunning quickness to his new country, his new school and learninganew language.</p> <p>“I could tell he was very bright,” she said.</p> <p>The quality of his classroom work skyrocketed as he gained confidence. By the time he took ISTEP the next year, he was on the honor roll. He passed.</p> <p>Teachers must always remember that English language learners bring with them valuable experiences far different than the average American student that can be assets, not only in their own lives but for their school to learn from.</p> <p>“They come with cultural capital,” she said. “The experience from their countries can transfer to the learning here in the U.S.”</p> <p><strong>25 schools with the highest percentage point change in ELL students from 2006-14</strong> Powered by <a href="http://www.typeform.com/?utm_campaign=typeform_HSWswZ&amp;utm_source=website&amp;utm_medium=typeform&amp;utm_content=typeform-embedded&amp;utm_term=English">Typeform</a><em>Thanks to </em><a href="http://luna360.com/"><em>LUNA</em></a><em> for providing the translation for this series.</em><br></p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839929/luna.jpg"></figure><p><strong>Mientras que la inmigración remodelaaIndianapolis, las escuelas lidian con problemas para mantenerse</strong><em>Indiana Central es el epicentro de una explosión de aprendices del idioma Ingles</em>Cuando Marium Khan, nacida en Pakistán, estaba estudiando para enseñar inglés como una nueva lengua, se imaginó trabajando en el extranjero, enseñando Inglesaniños en otros países.</p> <p>A más de un mes en su primer trabajo, Khan, en efecto, instruyeaniños de todo el mundo, pero lo hace desde aquí, Indianapolis, en la Escuela 79 al lado oeste de la ciudad.</p> <p>La experiencia de Khan con el fuerte desafío de intentar ayudaraestudiantes no nativos al inglésaque pronto se convirtieran capaces en el inglés para que puedan aprender otras materias, pasar exámenes estatales y prepararse para una vida en los Estados Unidos, está convirtiéndose cada vez más comúnatravés de Indiana central.</p> <p>Estos son de los primeros días del primer trabajo de Khan – ella se graduó de IUPUI en Diciembreeinició en la escuela más o menosaun mes después – pero ella ya tenía que improvisar. Los dos idiomas que ella conoce con fluidez, Urdu de PakistáneHindi de India – no son de uso. Los 730 estudiantes que asistenala Escuela 79 hablan docenas de idiomas, pero ninguno son los que ella conoce.</p> <p>“Mi grupo más difícil es primer grado,” ella dijo. “Hablan tantos idiomas pero no inglés. Acostumbrarseala atmósfera escolar es difícil para ellos.”</p> <p>La inmigración está cambiando rápidamenteaIndianapolis con grandes efectos en las escuelas.</p> <p>Desde 2006, dos tercios de las escuelas en Indiana vieron un incremento en el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés como nueva lengua, de acuerdoadatos demográficos para escuelas que fueron reportaron. El Condado de Marion es el epicentro de ésta tendencia.</p> <p>De las 25 escuelas en el estado que han visto aumentos de al menos 20 puntos de porcentaje de aprendices del idioma ingles desde 2006, 14 de esas están en el Condado de Marion, incluyendo5escuelas en Escuelas Públicas de Indianapolis y Municipio de Perry.</p> <p>Desde 2001, el número de aprendices del idioma ingles que asisten al distrito de escuelas del Condado de Marion ha aumentadoamás del 200 por cientoacerca de 13,000. Si todos esos estudiantes estuvieran en un distrito escolar, sería más grande que el Municipio de Warren, el cual tiene la quinta posición en las más grandes de los 11 distritos escolares de la ciudad.</p> <p>Pero al mismo tiempo las escuelas han lidiado con la necesidad rápido-crecienteaayudaraniñosaaprender inglés, el estado ha recortado los fondos que apoyan estos programasamás de la mitad. Esto ha contribuidoauna lucha difícil para las escuelas, para servir efectivamenteaesos niños y ha aumentado las preguntas acerca de lo justo de un sistema de responsabilidad que penaliceaalguno de estos sin considerar los difíciles retos que estos afrontan.</p> <p>Las escuelas están aprendiendo rápidamente que necesitan hacer cosas de diferente forma.</p> <p>El Municipio de Perry, por ejemplo, ha tenido que adaptarseaservirala comunidad rápido-creciente de refugiados de Birmania. IPS (Escuelas Públicas de Indianapolis – por sus siglas en inglés) ha servido por mucho tiempoaun gran número de estudiantes Hispanos con éxito. Pero con el rápido-creciente número de estudiantes hablando diferentes idiomas en casa – y no solo español – los oficiales de distritos se han embarcado en un esfuerzo para mejorar su aproche para enseñarles.</p> <p>No hay otro ejemplo más dramático en el estado del crecimiento repentino de niños aprendiendo inglés que el de la IPS Escuela 79. También pasaaser la escuela más exitosa de Indiana cuando se trata de ayudaraesos niños pasar exámenes estatales.</p> <p><strong>Enseñando diferente para mejores resultados</strong>Para cuando ella fue nombrada la directora de la Escuela 79, en el 2005, Joyce Akridge sabía que su vecindario estaba cambiando.</p> <p>Ya lo había visto anteriormente.</p> <p>Cuando Akridge inició su carrera como maestra en la Escuela 79 hace más de 40 años, se mudóalo que en ese entonces era un vecindario mayormente blanco, y nunca se fue. Sus propios hijos asistieronala escuela – algunas veces ellos estaban dentro de las pocas caras negras en lo que era frecuentemente una escuela blanca.</p> <p>Cuando se convirtió en la directora, la escuela ya había cambiadoamayormente estudiantes negros, pero casi no había estudiantes aprendiendo inglés – menos del3por ciento de la escuela. Ella no teníaaningún especialista en aprendizaje de idioma asignadoala escuela.</p> <p>Pero todo estabaapunto de cambiar – y rápido.</p> <p>Al final de su segundo año, 30 por ciento de los estudiantes necesitaban aprender inglés, y Akridge sabía que necesitaba ayuda. Junto con un grupo central de maestros, ella visitó otras escuelas con grandes números de aprendices del idioma Ingleseinició asignaturas escolares en IUPUI que la llevóauna certificación como una especialista en enseñaraniñosaaprender inglés.</p> <p>Ella aún sigue siendo la única directora de IPS con esa credencial.</p> <p>“No lo vi como un problema”, ella dijo. “Lo vi como un grupo de estudiantesalos cuales yo quería ayudar. Si le dasapersonas aunque sea cuatro o cinco buenas practicas, ellos pueden utilizarlas, verán progreso y querrán aprender más cosas que podrán hacer por los estudiantes.”</p> <p>Akridge y su equipo empezaronaemplear una serie de pequeñas técnicas para ayudaraniños aprender inglés. En ejemplo: ellos etiquetaron muchas de las cosas en los salones con sus nombres en ingles con notitas Post-it, así como sillas, mesas, y el pizarrón. Akridge reconoció que aprender un nuevo idioma era una gran tarea que requiere tiempo extra, así es que ella intentó encontrar formas para poder implementar más aprendizaje. Incluso en el comedor.</p> <p>Después de que los niños obtenían su comida y empezabanacomer, Akridge aparecía la mayoría de los días en lo que parecía “hora de jugar” cuando la directora tomaba el micrófono y daba inicióaactividades divertidas como aplaudir y llamar-y-responder. Pero realmente era aprendizaje sigiloso. Los aplausos son una mini lección en reconocimiento de patrones. Las preguntas son acerca de palabras de vocabulario.</p> <p>“Cuando yo ibaala escuela, aprender era como una manguera,” ella dijo. “Regabas, y todos esperaban su turno bajo el chorro y aprender. Ahora es un rocío oscilatorio. Algunos niños necesitan ser regados un poco más.”</p> <p>En el 2006, la escuela lidiaba con problemas – por dos años tuvo un promedio F. Pero mientras la escuela aumentaba con aprendices de idioma – ellos ahora forman más de la mitad de la escuela – actualmente ha visto sus puntajes en exámenes aumentar. Este es el 5to año continuo que la Escuela 79 ha sido calificada con A, por el estado.</p> <p>Pero no es fácil.</p> <p>Por ejemplo, Khan enseña una clase especial para “recién llegados:” inmigrantes que lleganala escuelaamitad del año sabiendo poco o nada de Ingles. En un reciente Viernes por la mañana, ella instruyóaseis alumnos de primer grado en el alfabeto inglés y palabras simples como “nosotros,” “el/la” y “yo” por 90 minutos. Ellos son de seis diferentes países en tres continentes: África, América del Sur y Asia.</p> <p>“Nunca había trabajado con tantos diferentes estudiantes de tantísimos lugares,” dijo Khan. “No sabes lo que están diciendo. Tienes que empezar desde abajo con el abecedario y fonéticos.</p> <p>La clase de recién llegados es una de las tantas innovaciones que Akridge y su equipo han instituido para tratar de ayudaraestudiantes inmigrantesaadaptarseala vida en los EU. Un puñado de técnicas usadas por escuelas que han tenido éxito con aprendices del idioma Ingles – desde ideas sofisticadas como uso objetico de la data de exámenes hasta el acto más simple como sonreírlealos niños – parece ayudar.</p> <p>Pero no todas las escuelas se adaptan as bien como la Escuela 79 lo ha hecho.</p> <p><strong>Los aprendices de Ingles se están ‘deslizando por las grietas’?</strong>Para muchas escuelas, la inundación de niños inmigrantes que hablan una gama de idiomas, han dejadoaniños confundidos, maestros frustrados, calificaciones de exámenes decreciendoeincluso han etiquetadoaescuelas que tradicionalmente son altas en calificación con calificaciones F.</p> <p>De las 25 escuelas de Indiana con el mayor incremento en el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés desde el 2006, 13 de ellas o han visto sus calificaciones bajar de A-a-F o se han visto en aprietos ya que ese porcentaje ha aumentado.</p> <p>Las escuelas con un gran número de estudiantes aprendiendo inglés afrontan un triple desafío: deben de ayudaraesos niñosaque aprendan bienahablar y escribir inglés, adaptarseauna nueva cultura mientras que gradualmente empiecenasentirse más como Estadounidenses y prepararlos académicamente para la universidad o carreras.</p> <p>Pero defensores de comunidades inmigrantes temen que los no-nativo-hablantes de inglés se están deslizando por las grietas.</p> <p>Los niños aprendiendo inglés como-un-nuevo-idioma han sido empujados, durante la última década, para adaptarse cada vez más rápido y se espera que tomen el Examen Estatal de Indiana para Progreso Educacional (ISTEP por sus siglas en inglés) más pronto – en muchos casos, antes de que hayan aprendido el suficiente idioma para poder entender que es lo que les piden. Indiana requiere que todos los aprendices del idioma ingles tomen el ISTEP de matemáticas sin importar que tan recientemente hayan llegado de sus países de origen. Ellos reciben un año de indulto antes de que ellos tomen el examen de Ingles.</p> <p>Para muchos de ellos, ese no es simplemente tiempo suficiente para aprender bien el inglés para que los exámenes midan que es lo que saben, Akridge dijo.</p> <p>“Creo que necesitamos reconocer la verdad: toma de tresacinco años para aprender un idioma,” ella dijo.</p> <p>Oficiales estatales dicen que sus manos están atadas por la Ley federal Que-Ningún Niño-Se-Quede-Atrás, la cual requirió un repaso de como Indiana probóaaprendices del idioma Ingles en el 2007 y resultó en las líneas de tiempo de prueba más estrictas.</p> <p>La ley federal fue diseñada, en parte, para incentivar escuelasapasar más tiempo y atención en niños en riesgoareprobar. Las escuelas han respondidoala presión de hacer que esos niños pasen los exámenes asignandoamás especialistas en lenguaje.</p> <p>La Escuela Primaria Nora del Municipio de Perry, también fue clasificada dentro de las primeras 25 en el estado por su crecimiento en la inscripción de aprendices del idioma Ingles, ahora tiene tres maestros de Ingles-como-nuevo-idioma y cinco asistentes para suplementar aprendizaje en las aulas para sus 705 estudiantes. Estos es más que lo doble de lo que la escuela tenía cinco años atrás. La Escuela 79 tiene un personal de9maestros y asistentes quienes se especializan en enseñar Inglés-como-nuevo-idiomaasus 734 estudiantes.</p> <p>Pero eso cuesta dinero, los cuales no han acompañado los mandatos federales y estatales.</p> <p><strong>Mientras que la inmigración crece, los fondos para el aprendizaje de Ingles disminuyen</strong>En el caso de Indiana, de hecho, ha ocurrido lo opuesto: la legislatura ha recortado asistencia extra para ayudar programas de enseñanzas de Ingles justo en el momento cuando las escuelas están teniendo problemas con un crecimiento explosivo de niños que los necesitan.</p> <p>El estado actualmente paga solo $87 por estudiante en asistencia extra para ayudaraaprendices del idioma Ingles, por debajo de aproximadamente el doble de hace una década. Simplemente no es suficiente dinero para apoyar el esfuerzo titánico de escuelas como la Escuela 79 o La Escuela Primaria Nora, dicen los educadores.</p> <p>Las escuelas no solo deben enseñaralos niños Ingles más sus otras materias, también deben ayudarasus niñosaadaptarse al desconcertante cambio de mudarseaEstados Unidos.</p> <p>Algunas veces, requisitos inquebrantables – como esos de los exámenes – pueden estorbar.</p> <p>Shawn Schlepp, una maestra de quinto grado de la escuela Nora, recalca como el darleauno de sus estudiantes el ISTEP de matemáticasasolo días después de haberse mudadoaE.U. erosionó una confianza tentativa que los dos habían comenzadoaconstruir.</p> <p>“Ella estaba sentada en esta mesa en este salón, y escogió los números del primer problema y los escribió en una pieza de papel,” Schlepp recuerda. “Me miró he hizo gestos. Ella simplemente quería saber qué hacer. Sumar? Restar? Pero no se me permitía decirle.”</p> <p>Después de unos minutos, la niña empezóallorar, dijo Schlepp. Esta conmovedora escena se repite muchas veces en escuelas con muchos estudiantes inmigrantes.</p> <p>Pero hay esperanza aun en esos momentos difíciles, como una historia de la Escuela 79 de Akridge lo demuestra.</p> <p>Era un estudiante de África que hablaba Frances que también se afrontó frente al examen ISTEP de matemáticas en su primer día de clases en la Escuela 79, Akridge recuerda. El también se frustró rápidamente y se soltó en llanto.</p> <p>Pero poco después, dijo Akridge, el niño empezóaadaptarse con asombrosa agilidadasu nuevo país, su nueva escuela y aprendiendo un nuevo idioma.</p> <p>“Podía ver que era muy inteligente,” ella dijo.</p> <p>La calidad de su trabajo escolar aumentó haciéndole obtener confianza. Para cuando tomó el ISTEP el año siguiente, él estaba en el cuadro de honor. Pasó.</p> <p>Los maestros siempre tienen que recordar que los aprendices del idioma ingles traen con ellos experiencias valiosas mucho muy diferentes que las de cualquier estudiante americano que pueda ser activo, no solo en sus propias vidas pero para que sus escuelas puedan aprender.</p> <p>“Viene con capital cultural,” dijo ella. “Las experiencias de sus países pueden ser transferidas para aprender aquí en los E.U.”</p> <p><strong>ရွှေဥနဥနွှဥနဥနပြောင်းဝင်afရောက်afနေထိုငိုင်jfခြင်းက အင်ဒ်ဒီယီယားနားဖလစ်+fမြိုဥနဥနဥနဥနကိုအိုအသွငွင်afပြောင်းလဲaJစေသည့်အ့်အချိနိန်မ်မှာSm</strong><br><strong> စာသင်afကျောင်းများလည်းအမီလီလိုကိုက်ရ်ရန်အ်အတွကွက်ရ်ရုနုန်းကန်afနေရပါသည်</strong><em>အင်ဒ်ဒီယီယားနားပြည်န်နယ်၏အလယ်ဗ်ဗဟိုသိုသည်အ်အင်္ဂင်္လလိပိပ်စ်စာသင်=fကြားသူမူများပေါက်ပ်ပွာ;သည့်အ့်အဓိကိကနေရာဖြစ်သ်သည် </em>ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖွား မေရီယံ ခန်း <strong>Marium Khan</strong> က အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာစကားအသစ်တခုအဖြစ် စာသင်ခဲ့သည့်အချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ပြီးအခြားနိုင်ငံက ကလေးများကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမည် ဟုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။</p> <p>ခန်း <strong>Khan</strong> ၏ပထမအလုပ်တလအတွင်းမှာပင် အခြားနိုင်ငံအသီးသီးက ကလေးများကိုသူတကယ်စာသင်ပေးရသည်။ သို့သော် သူက ဒီအင်ဒီယားနားဖလစ်မြို့ထဲမှာပင် မြို့၏အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိသော အမှတ်၇၉စာသင်ကျောင်းမှာစာသင်ပေးသည်။</p> <p>ခန်း ကြုံတွေ့ရသလို အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်သောကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အခြားဘာသာရပ်များသင်ယူရန် ပြည်နယ် အစိုးရစာမေးပွဲအောင်ရန်နှင့်အမေရိကမှာနေထိုင်ရန်ဘ၀ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမြန်မြန်တတ် လာအောင် သင်ပေးရသည့်အခက်အခဲမျိုး အင်ဒီယားနားပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာများလာပြီဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ဒါဟာ ခန်း၏ပထမအလုပ်အစပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ သူဟာ အိုင်ယူပီယူအိုင်တက္ကသိုလ်မှ ဒီဇင်ဘာလမှာ ဘွဲ့ရပြီးနောက်တလအကြာ တွင် စာသင်ကျောင်းမှာအလုပ်စလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကြုံရာကျပန်းဖန်တီးဆောင်ရွက်မှုများစလုပ်ခဲ့ရပြီး။ သူကောင်းကောင်းတတ် ကျွမ်းသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအူရဒူဘာသာစကားနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိန္ဒူဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံး သုံးလို့မရပါ။ အမှတ် ၇၉ ကျောင်းမှာ စာသင်သောကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၇၃၀ ခန့် ဘာသာစကားအမျိုးအစားဒါဇင်ပေါင်းများစွာသုံးကြသော်လည်း သူတတ်သည့်ဘာသာစကားတမျိုးမှမပါပါ။</p> <p>“ကျမအတွက်အခက်ဆုံးအုပ်စုက ပထမတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူမပြောခဲ့ပါသည်။ “သူတို့က ဘာသာ စကားပေါင်းစုံပြောကြပြီး အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်ပါ။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျင့်သားရဖို့သူတို့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်။”</p> <p>ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောနေထိုင်မှုသည် အင်ဒီယားနားဖလစ်မြို့ကို လျင်မြန်စွာအသွင်ပြောင်းလဲစေပြီး စာသင်ကျောင်းများအပေါ် ကြီးမား သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါသည်။</p> <p>၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစပြီး စာသင်ကျောင်းများ၏လူဦးရေစာရင်းတင်ပြမှုအရ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၏စာသင်ကျောင်းသုံးပုံနှစ်ပုံက အင်္ဂ လိပ်စာကို ဘာသာစကားအသစ်တခုအနေဖြင့်သင်ယူသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာတာကို တွေ့ရသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ မေရီယံကောင်တီက အလယ်ဗဟိုမှာကျရောက်နေသည်။</p> <p>၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူလူဦးရေ အနည်းဆုံး၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာကို တွေ့ရသည့်ပြည်နယ်တွင်းစာ သင်ကျောင်း ၂၅ ကျောင်းအနက်၊ အင်ဒီယားနားဖလစ်ပြည်သူ့စာသင်ကျောင်းများနှင့်ဖယ်ရီမြို့စာသင်ကျောင်းငါးကျောင်းစီအပါအ ဝင်၊ စာသင်ကျောင်း ၁၄ ကျောင်းက မေရီယံကောင်တီမှာရှိပါသည်။</p> <p>၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး မေရီယံကောင်တီဒေသလိုက်စာသင်ကျောင်းများတက်ရောက်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူလူဦးရေ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ် ၁၃၀၀၀ ခန့်များလာတာကိုတွေ့ရသည်။ အဲဒီကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးက ဒေသတခုထဲရှိစာသင် ကျောင်းများမှာစုပြီးကျောင်းတက်လျှင်၊ ဒေသ ၁၁ ခုအနက် ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ နံပါတ် ၅ အများဆုံးအဆင့်မှာရှိသည့် ဝါရန်မြို့နယ်ကျောင်းထက် လူဦးရေပိုများလိမ့်မည်။</p> <p>သို့သော် စာသင်ကျောင်းများမှ ကလေးများအင်္ဂလိပ်စာအမြန်သင်ရန်လိုအပ်မှုများနှင့်လုံးပန်းနေသည့်အချိန်မှာ အစိုးရက ဒီလိုအစီ အစဉ်မျိုးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောထောက်ပံ့မှုများကိုတဝက်ထက်ပိုပြီးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ခက်ခဲစွာရုန်းကန်နေ ရသောစာသင်ကျောင်းများအတွက် ကလေးများကိုထိရောက်စွာကူညီရန်အခက်အခဲပိုဖြစ်စေပြီး စာသင်ကျောင်းများရင်ဆိုင်နေရ သည့်အခက်အခဲများအပေါ်ထည့်မစဉ်းစားသည့်အပြင် တာဝန်ယူမှုစနစ်အရအပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် တရားမျှတမှုရှိမရှိ စသည့်မေး ခွန်းများထွက်လာပါသည်။</p> <p>စာသင်ကျောင်းများက ပုံမှန်လုပ်ရပ်နှင့်မတူသောနည်းလမ်းများရှာရမှာကို လျင်မြန်စွာသိရှိခဲ့ရပြီး။</p> <p>ဥပမာအနေဖြင့် ဖယ်ရီတောင်းရှစ်သည် မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏လူဦးရေအမြန်တိုးနှုန်းနှင့်လိုက်ဖက်အောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေး သည်။ အိုင်ဖီအက်စ်အင်ဒီယားနားဖလစ်ပြည်သူ့စာသင်ကျောင်းများသည် လက်တင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများစွာအတွက် အောင်မြင်မှုမရေမရာနှင့်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်မှာကြာပါပြီး။ သို့သော် အိမ်မှာစပိန်ဘာသာစကားတခုထဲမဟုတ်ပဲ အခြားဘာသာ စကားပြောသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများလာသဖြင့် ဒိစတြစ်ဒေသဆိုင်ရာအရာရှိများက ကလေးစာသင်ပေးသည့်နည်း လမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီး။</p> <p>အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသည့်ကလေးဦးရေလျင်မြန်စွာများလာတာကို အမှတ်၇၉အိုင်ပီအက်စ်ကျောင်းလောက် သိသာထင် ရှားသောအခြားဥပမာမရှိပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှာ ထိုကဲ့သို့ကလေးမျိုးကိုအစိုးရစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ပြင်ဆင်ပေး သည့်နေရာမှာ အောင်မြင်မှုအရရှိဆုံးကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။</p> <p><strong>ပိုကောင်းသည့်ရလဒ်အတွက်ထူးခြားစွာစာသင်ခြင်း</strong><br>၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမှတ်၇၉ကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာသည့်အချိန်မှာ ဂျွိုက်စ် အိတ်ခရစ်ဂ်ျ <strong>Joyce Akridge</strong> အနေဖြင့် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကပြောင်းလဲနေသည်ဟု သူသိရသည်။</p> <p>အရင်က သူတွေ့ခဲ့ဘူးသည်။ အိတ်ခရစ်ဂ်ျအနေဖြင့် အမှတ်၇၉ကျောင်းမှာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၄၀ က စာသင်သည့်အလုပ် ကိုစလုပ်သည့်အချိန်မှာ အဲဒီအချိန်ကအများအားဖြင့်လူဖြူပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး ဘယ်တော့မှမထွက် ခွာခဲ့ပါ။ သူ့ကလေးများလည်း ဒီကျောင်းကိုတက်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ လူဖြူအများစုတက်နေသည့်ကျောင်းမှာ တခါတရံ လူမည်း လေးငါးယောက်သာရှိသည့်အုပ်စုကြားထဲမှာပါပါသည်။</p> <p>ကျောင်းအုပ်အနေနှင့်သူပြန်ရောက်လာသည့်အခါ ကျောင်းက လူမည်းကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုကျောင်းအဖြစပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီး။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရသည့်ကျောင်းသားမရှိသလောက်ဖြစ်ပါသည်။ ၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းသည်။ ကျောင်းမှာ ဘာသာစကားဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ ခန့်ထားခြင်းမရှိပါ။</p> <p>သို့သော် အရာအားလုံးက နောက်ထပ်တခါ ပြောင်းလဲတော့မည်။ မြန်လဲမြန်ပါသည်။</p> <p>သူ့အတွက်ဒုတိယနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အင်္ဂလိပ်စကားသင်ရန်လိုအပ်ပြီး အကူအ ညီလိုနေသည်ဟု အိတ်ခရစ်ဂ်ျသိရသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားကျောင်းများကို ကျောင်းဆရာဆရာမ များအဖွဲ့တဖွဲ့နှင့်အတူ တွေ့ဆုံပြီး အိုင်ယူပီယူအိုင်တက္ကသိုလ်မှာ ကလေးများကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူလက် မှတ်ပေးသည့်အတန်းစတင်ခဲ့သည်။<br>သူဟာ အဲလိုအရည်အချင်းရှိသည့်အိုင်ပီအက်စ်ကျောင်းအုပ်တယောက်တည်းသာဖြစ်နေသေးသည်။ “ပြသနာတရပ်အဖြစ်ကျမ မမြင်ပါဘူး”ဟု သူပြောပါသည်။ “ကျမလက်လှမ်းမီချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအုပ်စုတစုအဖြစ်ကျမမြင်ပါတယ်။ လူတွေကို သူတို့အသုံးပြုလို့ရမဲ့လုပ်ရပ်ကောင်းလေးငါးမျိုးပေးလိုက်ရင် တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့လာပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတာ ပိုပြီးနည်းလမ်းရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်။”</p> <p>အိတ်ခရစ်ဂ်ျနှင့်သူ့အဖွဲ့က ကလေးအင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်မည့်နည်းမျိုးစုံစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာ စာသင်ခန်း ထဲမှာရှိသည့်ပစ္စည်းများကို ကပ်ခွာစာရွက်လေးများအပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အမည်တပ်ပေးသည်။ ဥပမာ ထိုင်ခုံ၊ စားပွဲ၊ သင် ပုန်းကြီး စသည့်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။ အိတ်ခရစ်ဂ်ျအနေဖြင့် ဘာသာစကားအသစ်တခုသင်ယူခြင်းဟာ လုပ်ငန်းကြီးတခုဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုပေးရန်လိုသည်ဟု သူအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အတွက် စာသင်ချိန်များများရအောင်သူကြိုးစားပြီးဖန်တီးပေးသည်။ နေ့ လည်စာစားသည့်အခန်းပါပါဝင်သည်။</p> <p>ကလေးများအစားအစာသွားယူပြီးစစားသည့်အချိန်နောက်ပိုင်းမှာ အိတ်ခရစ်ဂ်ျက ကစားချိန်နှင့်အတူ ကျောင်းအုပ်က မိုက်ခွက် ထဲမှာဦးဆောင်ပြီး လက်ခုပ်တီးခြင်း အမေးအဖြေစကားပြောခြင်း စသည့်ပျော်စရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ပေးသည်။ လက်ခုပ်တီးခြင်းသည် အစဉ်လိုက်ဆင်တူပုံများကိုမှတ်မိရန်သင်ခန်းစာငယ်လေးတခုဖြစ်သည်။ အမေးအဖြေမှာမေးသည့်မေးခွန်းများ သည် စာလုံးများနှင့်ပတ်သက်သည်။</p> <p>“ကျမကျောင်းတက်တဲ့အချိန်တုန်းက စာသင်တာရေပိုက်နဲ့တူတယ်” ဟု သူဆိုပါသည်။ “ရေဖြန်းပေးရုံပဲ၊ လူတိုင်းက ရေပိုက်ထဲမှ ထွက်လာတဲ့ရေစိုသလို စာသင်ယူကြတယ်။ အခုတော့၊ ပုံမှန်ချိန်ပြီးဖြန်းရသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကလေးတချို့က ရေနည်းနည်းလေး ပိုဖြန်းပေးဖို့လိုတယ်။”</p> <p>၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စာသင်ကျောင်းကရုန်းကန်နေသည်။ <strong>F</strong> အဖြစ် နှစ်နှစ်မအောင်မြင်သည့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကျောင်းမှာဘာသာစကားသင်ယူသူနှင့်ပြည့်ကြပ်နေသည့်အချိန် – အခုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ၏ထက်ဝက်ထက်ပိုများ နေသည့်အချိန်မှာ – အစိုးရစာမေးပွဲအောင်မှတ်ကောင်းလာတာတွေ့ရသည်။ အခုအမှတ်၇၉ကျောင်းက ငါးနှစ်ဆက်တိုက် <strong>A</strong> အဖြစ်အောင်မှတ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းရှိသည်ဟုအစိုးရသတ်မှတ်ခဲ့သည်။</p> <p>သို့သော် အလွယ်တကူမရခဲ့ပါ။</p> <p>ဥပမာ ခန်း <strong>Khan</strong> က “လူသစ်”အတွက် အထူးအတန်းမှာစာသင်ပေးသည်။ စာသင်နှစ် နှစ်တဝက်မှရောက်လာသောရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်သူများ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနည်းနည်းသို့မဟုတ်လုံး၀မပြောတတ်သူများကို စာသင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးခင်ကသောကြာနေ့တမနက်မှာ ပထမအတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများနှင့် “ကျနုပ်တို့၊” “ထို၊” “ရှိသည်ဖြစ်သည်၊” စသည့်အခြေခံစာလုံးများကို မိနစ် ၉၀ ကြာသင်ပေးသည်။ သူတို့က တိုက်ကြီးသုံးတိုက်ဖြစ်သည့် အာဖ ရိကတိုက်၊ တောင်အမေရိကတိုက်နှင့်အာရှတိုက်များမှနိုင်ငံခြောက်နိုင်ငံကရောက်လာကြသူများဖြစ်ပါသည်။</p> <p>“နေရာပေါင်းစုံကလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများများနဲ့တခါမှကျမမကြုံတွေ့ဖူးဘူး” ဟု ခန်းကပြောပါသည်။ “သူတို့ဘာပြော လဲကိုယ်မသိ။ အခြေခံအက္ခရာနဲ့အသံထွက်က စသင်ပေးရတယ်။”</p> <p>လူသစ်အတန်းသည် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများ အမေရိကမှာဘ၀ထူထောင်နေထိုင်ရာတွင် အ ထောက်အကူဖြစ်ရန်အတွက် အိတ်ခရစ်ဂ်ျနှင့်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ဖန်တီးမှုတခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် အောင်မြင် မှုရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုကျောင်းကအသုံးချခြင်းဖြင့် သူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ ကလေးကို ရိုးရိုးလေး ပြုံးပြတာကအစ စာစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုနေရာမှန်အသုံးချသလို ရှုပ်ထွေးသောတွေးခေါ်ဆောင်ရွက်မှုများလည်း အကျိုးရှိပါသည်။</p> <p>သို့သော် စာသင်ကျောင်းတိုင်းက အမှတ်၇၉ကျောင်းလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်နိုင်ပါ။</p> <p><strong>အင်္ဂလိပ်ဘသာစကားသင်ယူသူများသည် ‘လျစ်လျူရှုမှုကြုံတွေ့နေရသလား’</strong><br>ကျောင်းအတော်များများမှာ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကလေးများလွမ်းမိုးပြီး ဘာသာစကားမျိုးစုံပြောကြသည့်အတွက် ကလေးများကိုစိတ်ရှုပ်စေသည်၊ ဆရာဆရာမများကိုအားမလိုအားမရဖြစ်စေသည်၊ စာမေးပွဲအောင်မှတ်များကျဆင်းစေပြီး အစဉ် အလာအရအမှတ်ကောင်းသည့်အချို့ကျောင်းများမှာ <strong>F</strong> အဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။</p> <p>၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရသော်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးထိုးတက်လာသည့်အင်ဒီ ယားနားကျောင်း၂၅ကျောင်းအနက် ၁၃ ကျောင်းက <strong>A</strong> မှ <strong>F</strong> သို့အမှတ်အဆင့်ကျဆင်းသွားတာကြုံရသည်၊ သို့မဟုတ် ရာခိုင်နှုန်း များလာသည်နှင့်အမျှ အမှတ်အဆင့်ရပ်တန့်နေသည်။</p> <p>အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများသည့်ကျောင်းများအတွက်အခက်အခဲသုံးဆကြုံတွေ့ရသည်။ သူတို့က အဲဒီကလေးများကို အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖတ်တတ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်သို့အ သွင်ပြောင်းပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအမေရိကန်သားလိုခံယူလာမည့်အတွက်လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင် အတွက်ပြင်ဆင်ရာမှာလည်းကောင်း၊ စသည့်ကိစ္စများကို အဲဒီကျောင်းများကကူညီပေးရသည်။</p> <p>သို့သော် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အားပေးကူညီသူများက ဒေသခံအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ် သူများသည် လျစ်လျူရှုခံရမှာကိုစိုးရိမ်ကြသည်။</p> <p>အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာစကားအသစ်တခုအနေဖြင့်သင်ယူနေသောကလေးများကို လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း မြန်မြန်ပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်ရန်နှင့် <strong>ISTEP</strong> အိုင်းစတက်အင်ဒီယားနားတပြည်နယ်လုံးပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုစာမေးပွဲကို စောစောဖြေဆိုရန်အတွက် ဖိအားပေးခံရသည်။ အများအားဖြင့် ဘာသာစကားလုံလောက်စွာမသင်ရသေးသည့်အတွက် သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ပါ။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူများအားလုံးကို သူတို့နိုင်ငံမှဒီနိုင်ငံကို ရောက်လာတာကြာသည်ဖြစ်စေ မကြာသည်ဖြစ်စေ၊ အိုင်းစတက်သင်္ချာစာမေးပွဲမဖြေမနေရသတ်မှတ်ထားသည်။ အင်္ဂလိပ်စာမေး ပွဲကိုဖြေဆိုရန် တနှစ်ရွှေ့ဆိုင်းထားပေးသည်။</p> <p>သူတို့အတော်များများအတွက် အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာသူတို့၏အသိဥာဏ်တိုင်းထွာသည့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အင်္ဂလိပ်စာကောင်း ကောင်းသင်မည့်အချိန်မလုံလောက်ပါဟု အိတ်ခရစ်ဂ်ျကပြောပါသည်။</p> <p>“တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုအသိအမှတ်ပြုဘို့လိုမယ်လို့ကျမထင်တယ်၊ ဘာသာစကားတခုသင်ဘို့အတွက် သုံးနှစ်ကနေငါးနှစ်ကြာ ပါတယ်” ဟုသူပြောခဲ့ပါသည်။</p> <p>ပြည်နယ်အစိုးရအရာရှိများက ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ ဘယ်ကလေးမှမကျန်ခဲ့ရဥပဒေအရ သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုဆိုပါသည်။ ဒီကိစ္စကိုပြင်ချင်လျှင် ၂၀၀၇ မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကို အင်ဒီယားနားပြည်နည်က စာမေးပွဲစစ်ဆေးပုံနှင့်စာမေးပွဲဖြေရန်အချိန် ပိုပြီးတင်းကြပ်သွားပုံများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးပြီ။ အချို့ရည်ရွယ်ချက်များက ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ရှိသည့်ကလေးများအတွက် အချိန်ပိုပေးပြီး ပိုဂရုစိုက်ရန်အတွက် စာသင်ကျောင်းများကိုတွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီကလေးများစာမေးပွဲအောင်ရမည်ဆိုသည့်ဖိအားများ အပေါ် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်ပိုခန့်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းများကတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။</p> <p>ဝါရှင်တန်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်၏ <strong>Nora</strong> နော်ရာမူလတန်းကျောင်းလည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်သူစာရင်းဝင်များလာသည့်ပြည်နယ် အတွင်းထိတ်တန်းကျောင်း၂၅ ကျောင်းထဲမှာပါပါသည်။ အခုအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုဘာသာစကားအသစ်အဖြစ်သင်ပေးသည့်ဆရာ ဆရာမသုံးယောက်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသား ၇၀၅ ယောက်ရှိသည့်စာသင်ခန်းများအတွက် လက်ထောက်ဆရာဆရာမငါး ယောက်နှင့်ဖြည့်စွက်ပေးရသည်။ လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အချိန်ထက်အဲဒီကျောင်းမှာနှစ်ဆပိုများလာသည်။ အမှတ်၇၉ကျောင်းမှာ ဝန် ထမ်းဆရာဆရာမနှင့်လက်ထောက်၊ အားလုံးကိုးယောက်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၇၃၄ ယောက်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာအသစ်တရပ်အနေဖြင့်အထူးသင်ပေးသည်။</p> <p>သို့သော် အဲဒါဟာကုန်ကျငွေရှိပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အစိုးရကဥပဒေပြဌာန်းပြီးကုန်ကျစရိတ်မပေးပါ။</p> <p><strong>ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူများလာသည်နှင့်အမျှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေနည်းလာသည်</strong>အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ စာသင်ကျောင်းများက အကူအညီလိုအပ်သည့်ကလေးဦးရေများလာခြင်းနှင့် ရုန်းကန်ရသည့်အချိန်မှာပင် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်သည့်အစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးအပိုများကိုဖြတ် လိုက်သည်။</p> <p>လက်ရှိအချိန်မှာ အစိုးရက အင်္ဂလိပ်စာသင်သူအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးကို ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်မှာ ၈၇ ဒေါ်လာသာ ပေးသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အချိန်ကထက် တဝက်လောက်လျော့သွားသည်။ ဒါဟာ အမှတ်၇၉ကျောင်း သို့မဟုတ်နော်ရာမူလ တန်းကျောင်းတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်ရန်ငွေမလုံလောက်ပါဟု ပညာသင်ကြားပို့ချသူများကပြောပါသည်။</p> <p>စာသင်ကျောင်းများသည် ကလေးများကိုအင်္ဂလိပ်စာနှင့်အခြားဘာသာရပ်များသင်ပေးရုံသာမက ကလေးများကိုအမေရိကသို့ရွှေ့ ပြောင်းလာခြင်းဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အလိုက်သင့်အောင်ကူညီပေးရသည်။</p> <p>တခါတရံမှာ၊ စာမေးပွဲများလို-အတည်တကျဖြစ်သောလိုက်နာဖြည့်စည်းရမည့်အရာများဟာ အဟန့်အတားဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။</p> <p>နော်ရာမှာငါးတန်းဆရာမဖြစ်သည့် ရှောန် ရှလက်ဖ် <strong>Shawn Schlepp</strong> သည် ရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကကိုရောက်လာသည့် ကျောင်းသူတယောက်ကို အိုင်းစတက်သင်္ချာစာမေးပွဲစစ်သည့်အတွက် သူတို့နှစ်ဘက်လုံးစတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ယုံကြည်မှုအ စမ်းပျက်စီးသွားခဲ့တာကို သူမှတ်မိသည်။</p> <p>“သူဟာ ဒီအခန်းထဲကဒီခုံမှာထိုင်နေတယ်၊ မေးခွန်းအမှတ်စဉ်များထဲကတခုသူရွေးလိုက်ပြီးစာရွက်လေးတရွက်အပေါ်မှာရေးချလိုက် တယ်” ဟု ရှလက်ဖ်ကပြောပြသည်။ “သူကကျမကိုကြည့်ပြီးလက်နဲ့လက်ဟန်အမူအရာပြခဲ့တယ်။ သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ရုံ သက်သက်ပါ၊ ပေါင်းရမလား၊ နှုတ်ရမလား၊ ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့ကိုပြောပြခွင့်မရှိပါ။”</p> <p>လေးငါးမိနစ်နောက်အကြာမှာ၊ အဲဒီကလေးမက စပြီးငိုပါတော့သည်ဟု ရှလက်ဖ်ပြောပြပါသည်။ ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများက အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်တွေ့ကြရသည်။</p> <p>သို့သော် အိတ်ခရစ်ဂ်ျတင်ပြသွားသည့်အမှတ်၇၉ကျောင်းပုံပြင်အဖြစ်အပျက်တခုအရ ခက်ခဲသည့်အချိန်ကာလများအထဲမှာပင် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးသည်။</p> <p>ပြင်သစ်စကားပြောသည့်အာဖရိနိုင်ငံကကျောင်းသားတယောက်လည်း အမှတ်၇၉ကျောင်းကိုပထမဆုံးတက်ရောက်သည့်နေ့၌ အိုင်းစတက်သင်္ချာစာမေးပွဲအရှေ့မှာကြေကွဲပါတော့သည်ဟု အိတ်ခရစ်ဂ်ျကပြောပြသည်။ ဆက်လက်ပြီးသူဟာ လျင်မြန်စွာစိတ်မ ကျေမနဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ထွက်ပါတော့သည်။</p> <p>သို့သော်၊ အဲဒီနောက်မကြာမီမှာ အိတ်ခရစ်ဂ်ျပြောပြချက်အရ အဲဒီယောက်ျားလေးက သူ၏နိုင်ငံသစ် ကျောင်းသစ်နှင့်ဘာသာ စကားအသစ်သင်ယူရာမှာ အံ့ဩောရလောက်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလျင်မြန်စွာလိုက်လုပ်ခဲ့သည်။</p> <p>“သူကအလွန်တော်ပါတယ်လို့ကျမပြောနိုင်တယ်”ဟု သူပြောပြခဲ့ပါသည်။</p> <p>သူ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်မှုရရှိလာတာနှင့်အမျှ အတန်းထဲစာသင်သည့်အရည်အချင်းထိုးတက်ပါတော့သည်။ နောက် တနှစ်အိုင်းစတက်ပြန်ဖြေသည့်အချိန်မှာ သူက ဂုဏ်ထူးအထဲမှာပါခဲ့သည်။ သူစာမေးပွဲအောင်ခဲ့သည်။</p> <p>ကျောင်းဆရာဆရာမများက အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများဟာ သူတို့နှင့်အတူပါလာသည့် အကျိုးရှိသောအတွေ့အကြုံများသည် သာမန် အမေရိကန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများထက်ကွာခြားပြီး သူတို့၏ဘ၀သာမက ကျောင်းအတွက်ပါသင်ခန်းစာယူနိုင်သည့်အရာအ ဖြစ်အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။</p> <p>“သူတို့က ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့လာကြတယ်” ဟု သူပြောခဲ့သည်။ “သူတို့နိုင်ငံမှအတွေ့အကြုံများကို အမေရိကမှာသင်ယူလေ့လာစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။”</p> <p>Chalkbeat isanonprofit news site covering educational change in public schools.</p> <link rel="canonical" href="https://in.chalkbeat.org/2015/4/19/21113618/as-immigration-reshapes-indianapolis-schools-struggle-to-keep-up" /> <img src="http://www.itjon.com/phppt/pixel.php?a=https%3A%2F%2Fin.chalkbeat.org%2F2015%2F4%2F19%2F21113618%2Fas-immigration-reshapes-indianapolis-schools-struggle-to-keep-up" alt="" />
As immigration reshapes Indianapolis, schools struggle to keep up Scott Elliott, Chalkbeat Indiana Apr 19, 12:00am EDT When Marium Khan, born in Pakistan, was studying to teach English asanew language, she imagined herself working overseas, teaching English to children in other countries. Just more thanamonth into her first job, Khan does, indeed, instruct kids from all over the world, but she does it from right here in Indianapolis at School 79 on the city’s West side. Khan’s experience with the steep challenge of trying to help non-native English speaking students become quickly proficient enough at English so they can learn other subjects, pass state tests and prepare foralife in the U.S. is increasingly common across central Indiana. These are the early days of Khan’s first job — she graduated from IUPUI in December and started at the school aboutamonth later — but already she has had to improvise. The two languages she knows fluently, Pakistan’s Urdu and India’s Hindi languages — are of no use. The 730 students who attend School 79 speak dozens of languages, but none are the ones she knows. “My hardest group is first-graders,” she said. “They speak so many languages and no English. Getting used to the environment is hard for them.” Immigration is rapidly changing Indianapolis with major effects on schools. Since 2006, two-thirds of Indiana schools saw an increase in the percentage of students learning English asanew language, according to demographic data for schools that reported. Marion County is the epicenter of that trend. Data source: Indiana Department of Education Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Of the 25 schools in the state that have seen jumps of at least 20 percentage points of English language learners since 2006, 14 of them are in Marion County, including five schools each in Indianapolis Public Schools and Perry Township. Since 2001, the number of English language learners attending Marion County school districts has jumped by more than 200 percent to about 18,000. If all those students were in one school district, it would be bigger than Wayne Township, which ranks second largest of the city’s 11 school districts. But at the same time schools have grappled with the fast-growing need to help children learn English, the state has cut the funding that supports those programs by more than half. That’s contributed toadifficult struggle for schools to effectively serve those children and raised questions about the fairness of an accountability system that penalizes some of them without consideration for the difficult challenge they face. School are quickly learning they need to do things differently. Perry Township, for example, has had to adapt to serveafast-growing community of Burmese refugees. IPS has long servedalarge number of Hispanic students with mixed success. But with the number of students speakingadifferent language at home — and not just Spanish — growing fast, district officials are embarking on an effort to rethink their approach to teaching them. There is no more dramatic example in the state of swift growth of children learning English than IPS School 79. It also happens to be Indiana’s most successful school when it comes to helping those children pass state tests. Data source: Indiana Department of Education Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Teaching differently for better results By the time she was named School 79’s principal in 2005, Joyce Akridge knew her neighborhood was changing. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19844731/79.gif] She had seen it before. When Akridge started her teaching career at School 79 more than 40 years ago, she moved to what was thenamostly white neighborhood and never left. Her own children attended the school — sometimes they were among justafew black faces in what was thenamostly white school. When she returned as principal, the school had shifted toamostly black student body, but there were hardly any students learning English — less than3percent of the school. She didn’t have any specialists in language learning assigned to the school. But everything was about to change again — and fast. Data source: Indiana Department of Education Credits: Sarah Glen/Chalkbeat By the end of her second year, 30 percent of the students needed to learn to speak English, and Akridge knew she needed help. Along withacore group of teachers, she visited other schools with large numbers of English language learners and started classwork at IUPUI that led toacertification as asaspecialist in teaching children to learn English. She is still the only IPS principal with that credential. “I didn’t see it asaproblem,” she said. “I saw it asagroup of students I wanted to reach. If you give people even four or five good best practices they can use, they will see progress and will want to learn more things they can do for the students.” Akridge and her team began to employaseries of small techniques to help children learn English. On example: they labeled lots of items in the classroom with their English names on Post-It notes, such as chairs, tables and the board. Akridge recognized learninganew language wasahuge task that required extra time, so she tried to find ways to squeeze in more learning. Even in the lunchroom. After kids get their food and start eating, Akridge appears most days for what seems like play time when the principal takesamicrophone and leads them in fun activities like clapping and call-and-response. But really it’s stealth learning. The clapping isamini-lesson in pattern recognition. The questions are about vocabulary words. “When I was going to school, learning wasawater hose,” she said. “You just spray, and everybody was expected to get in the stream and learn. Now it’s an oscillating spray. Some children need to be wateredalittle more.” Back in 2006, the school was struggling — it had been rated an F for two years. But as the school has swelled with language learners — they now make up more than half the school — it’s actually seen its state test scores rise. This is School 79’s fifth straight year rated an A by the state. But it doesn’t come easy. For example, Khan teachesaspecial class for “newcomers:” immigrants who arrive at the school mid-year knowing little or no English. Onarecent Friday morning, she instructed six first-graders in the English alphabet and simple words like “we,” “the” and “am” for 90 minutes. They came from six different countries on three continents: Africa, South America and Asia. “I’ve never worked with so many different students from so many places,” Khan said. “You don’t know what they are saying. You have to start from the bottom with alphabet and phonics.” The newcomers class is one of many innovations Akridge and her staff have instituted to try to help immigrant students adapt to life in the U.S. A handful of techniques used by schools that have had success with English language learners — from sophisticated ideas like targeted use of test data to the most simple acts like smiling at the children — seem to help. But not every school adapts as well as School 79 has. Are English learners ‘slipping through the cracks’? For many schools, floods of immigrant children speaking an array of languages have left children confused, teachers frustrated, test scores falling and even labeled some traditionally high-scoring schools with F grades. Of the 25 Indiana schools with the biggest jumps in the percentage of students learning English since 2006, 13 of them have either seen their A-to-F grades drop or stagnate as that percentage has grown. Schools with large numbers of students learning English faceatriple challenge: they must help those kids learn to speak and write English well, adapt toanew culture as they gradually begin to feel more like Americans and prepare academically for college or careers. But advocates for immigrant communities fear non-native English speakers are slipping through the cracks. Children learning English asanew language have been pushed over the last decade to adapt more quickly and are expected to take ISTEP sooner — in many cases, before they have learned enough language to really understand what’s being asked of them. Indiana requires all English language learners to take the ISTEP math test no matter how recently they have arrived from their home countries. They getaone-year reprieve before they have to take the English test. For many of them, that’s simply not enough time to learn English well enough for the exams to truly measure what they know, Akridge said. “I think we need to acknowledge what is truth: it takes three to five years to learnalanguage,” she said. State officials say their hands are tied by the federal No Child Left Behind Act, which required an overhaul of how Indiana tested English language learners in 2007 and resulted in the stricter testing timelines. The federal law was designed, in part, to incentivize schools to spend more time and attention on children at risk for failure. Schools have responded to the pressure to get those kids to pass tests by assigning more language specialists. Washington Township’s Nora Elementary School, also ranked among the top 25 schools in the state for growth of it English language learner enrollment, now has three teachers of English asanew language and five aides to supplement classroom learning for its 705 students. That’s twice as many as the school had five years ago. School 79 hasastaff of nine teachers and aides who specialize in teaching English asanew language for is 734 students. But that costs money, which hasn’t accompanied the federal and state mandates. As immigration grew, funding for English learning shrunk In the case of Indiana, in fact, the quite the opposite has occurred: the legislature has slashed extra aid to support English language learning programs at the very moment when schools are struggling with explosive growth of children who need them. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839907/seriespromo.jpg] The state currently pays just $87 per student in extra aid to support English language learners, down from about twice as muchadecade ago. It simply isn’t enough money to support the titanic effort of schools like School 79 or Nora Elementary School, educators say. The schools must not only teach children English plus their other subjects, they also must help their kids adapt to the bewildering change of moving to America. Sometimes, unwavering requirements — like those for testing — can get in the way. Shawn Schlepp,afifth grade teacher at Nora, recalls how giving one of her students the ISTEP math test just days after moving to the U.S. erodedatentative trust the two had begun to build. “She was sitting at this table in this room, and she picked out the numbers from the first problem and wrote them down onapiece of paper,” Schlepp recalled. “She looked at me and gestured. She just wanted to know what to do. Add? Subtract? But I wasn’t allowed to tell her.” Afterafew minutes, the girl began to cry, Schlepp said. This heartwrenching scene is replayed many times at schools with lots of immigrant students. But there is hope even in those difficult moments, asaSchool 79 story from Akridge demonstrates. It wasaFrench-speaking student from Africa who also was plopped in front of the ISTEP math test on his very first day at School 79, Akridge recalled. He also quickly became frustrated and dissolved into tears. But soon after, Akridge said, the boy began to adapt with stunning quickness to his new country, his new school and learninganew language. “I could tell he was very bright,” she said. The quality of his classroom work skyrocketed as he gained confidence. By the time he took ISTEP the next year, he was on the honor roll. He passed. Teachers must always remember that English language learners bring with them valuable experiences far different than the average American student that can be assets, not only in their own lives but for their school to learn from. “They come with cultural capital,” she said. “The experience from their countries can transfer to the learning here in the U.S.” 25 schools with the highest percentage point change in ELL students from 2006-14 Powered by TypeformThanks to LUNA for providing the translation for this series. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839929/luna.jpg] Mientras que la inmigración remodelaaIndianapolis, las escuelas lidian con problemas para mantenerse Indiana Central es el epicentro de una explosión de aprendices del idioma Ingles Cuando Marium Khan, nacida en Pakistán, estaba estudiando para enseñar inglés como una nueva lengua, se imaginó trabajando en el extranjero, enseñando Inglesaniños en otros países. A más de un mes en su primer trabajo, Khan, en efecto, instruyeaniños de todo el mundo, pero lo hace desde aquí, Indianapolis, en la Escuela 79 al lado oeste de la ciudad. La experiencia de Khan con el fuerte desafío de intentar ayudaraestudiantes no nativos al inglésaque pronto se convirtieran capaces en el inglés para que puedan aprender otras materias, pasar exámenes estatales y prepararse para una vida en los Estados Unidos, está convirtiéndose cada vez más comúnatravés de Indiana central. Estos son de los primeros días del primer trabajo de Khan – ella se graduó de IUPUI en Diciembreeinició en la escuela más o menosaun mes después – pero ella ya tenía que improvisar. Los dos idiomas que ella conoce con fluidez, Urdu de PakistáneHindi de India – no son de uso. Los 730 estudiantes que asistenala Escuela 79 hablan docenas de idiomas, pero ninguno son los que ella conoce. “Mi grupo más difícil es primer grado,” ella dijo. “Hablan tantos idiomas pero no inglés. Acostumbrarseala atmósfera escolar es difícil para ellos.” La inmigración está cambiando rápidamenteaIndianapolis con grandes efectos en las escuelas. Desde 2006, dos tercios de las escuelas en Indiana vieron un incremento en el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés como nueva lengua, de acuerdoadatos demográficos para escuelas que fueron reportaron. El Condado de Marion es el epicentro de ésta tendencia. De las 25 escuelas en el estado que han visto aumentos de al menos 20 puntos de porcentaje de aprendices del idioma ingles desde 2006, 14 de esas están en el Condado de Marion, incluyendo5escuelas en Escuelas Públicas de Indianapolis y Municipio de Perry. Desde 2001, el número de aprendices del idioma ingles que asisten al distrito de escuelas del Condado de Marion ha aumentadoamás del 200 por cientoacerca de 13,000. Si todos esos estudiantes estuvieran en un distrito escolar, sería más grande que el Municipio de Warren, el cual tiene la quinta posición en las más grandes de los 11 distritos escolares de la ciudad. Pero al mismo tiempo las escuelas han lidiado con la necesidad rápido-crecienteaayudaraniñosaaprender inglés, el estado ha recortado los fondos que apoyan estos programasamás de la mitad. Esto ha contribuidoauna lucha difícil para las escuelas, para servir efectivamenteaesos niños y ha aumentado las preguntas acerca de lo justo de un sistema de responsabilidad que penaliceaalguno de estos sin considerar los difíciles retos que estos afrontan. Las escuelas están aprendiendo rápidamente que necesitan hacer cosas de diferente forma. El Municipio de Perry, por ejemplo, ha tenido que adaptarseaservirala comunidad rápido-creciente de refugiados de Birmania. IPS (Escuelas Públicas de Indianapolis – por sus siglas en inglés) ha servido por mucho tiempoaun gran número de estudiantes Hispanos con éxito. Pero con el rápido-creciente número de estudiantes hablando diferentes idiomas en casa – y no solo español – los oficiales de distritos se han embarcado en un esfuerzo para mejorar su aproche para enseñarles. No hay otro ejemplo más dramático en el estado del crecimiento repentino de niños aprendiendo inglés que el de la IPS Escuela 79. También pasaaser la escuela más exitosa de Indiana cuando se trata de ayudaraesos niños pasar exámenes estatales. Enseñando diferente para mejores resultados Para cuando ella fue nombrada la directora de la Escuela 79, en el 2005, Joyce Akridge sabía que su vecindario estaba cambiando. Ya lo había visto anteriormente. Cuando Akridge inició su carrera como maestra en la Escuela 79 hace más de 40 años, se mudóalo que en ese entonces era un vecindario mayormente blanco, y nunca se fue. Sus propios hijos asistieronala escuela – algunas veces ellos estaban dentro de las pocas caras negras en lo que era frecuentemente una escuela blanca. Cuando se convirtió en la directora, la escuela ya había cambiadoamayormente estudiantes negros, pero casi no había estudiantes aprendiendo inglés – menos del3por ciento de la escuela. Ella no teníaaningún especialista en aprendizaje de idioma asignadoala escuela. Pero todo estabaapunto de cambiar – y rápido. Al final de su segundo año, 30 por ciento de los estudiantes necesitaban aprender inglés, y Akridge sabía que necesitaba ayuda. Junto con un grupo central de maestros, ella visitó otras escuelas con grandes números de aprendices del idioma Ingleseinició asignaturas escolares en IUPUI que la llevóauna certificación como una especialista en enseñaraniñosaaprender inglés. Ella aún sigue siendo la única directora de IPS con esa credencial. “No lo vi como un problema”, ella dijo. “Lo vi como un grupo de estudiantesalos cuales yo quería ayudar. Si le dasapersonas aunque sea cuatro o cinco buenas practicas, ellos pueden utilizarlas, verán progreso y querrán aprender más cosas que podrán hacer por los estudiantes.” Akridge y su equipo empezaronaemplear una serie de pequeñas técnicas para ayudaraniños aprender inglés. En ejemplo: ellos etiquetaron muchas de las cosas en los salones con sus nombres en ingles con notitas Post-it, así como sillas, mesas, y el pizarrón. Akridge reconoció que aprender un nuevo idioma era una gran tarea que requiere tiempo extra, así es que ella intentó encontrar formas para poder implementar más aprendizaje. Incluso en el comedor. Después de que los niños obtenían su comida y empezabanacomer, Akridge aparecía la mayoría de los días en lo que parecía “hora de jugar” cuando la directora tomaba el micrófono y daba inicióaactividades divertidas como aplaudir y llamar-y-responder. Pero realmente era aprendizaje sigiloso. Los aplausos son una mini lección en reconocimiento de patrones. Las preguntas son acerca de palabras de vocabulario. “Cuando yo ibaala escuela, aprender era como una manguera,” ella dijo. “Regabas, y todos esperaban su turno bajo el chorro y aprender. Ahora es un rocío oscilatorio. Algunos niños necesitan ser regados un poco más.” En el 2006, la escuela lidiaba con problemas – por dos años tuvo un promedio F. Pero mientras la escuela aumentaba con aprendices de idioma – ellos ahora forman más de la mitad de la escuela – actualmente ha visto sus puntajes en exámenes aumentar. Este es el 5to año continuo que la Escuela 79 ha sido calificada con A, por el estado. Pero no es fácil. Por ejemplo, Khan enseña una clase especial para “recién llegados:” inmigrantes que lleganala escuelaamitad del año sabiendo poco o nada de Ingles. En un reciente Viernes por la mañana, ella instruyóaseis alumnos de primer grado en el alfabeto inglés y palabras simples como “nosotros,” “el/la” y “yo” por 90 minutos. Ellos son de seis diferentes países en tres continentes: África, América del Sur y Asia. “Nunca había trabajado con tantos diferentes estudiantes de tantísimos lugares,” dijo Khan. “No sabes lo que están diciendo. Tienes que empezar desde abajo con el abecedario y fonéticos. La clase de recién llegados es una de las tantas innovaciones que Akridge y su equipo han instituido para tratar de ayudaraestudiantes inmigrantesaadaptarseala vida en los EU. Un puñado de técnicas usadas por escuelas que han tenido éxito con aprendices del idioma Ingles – desde ideas sofisticadas como uso objetico de la data de exámenes hasta el acto más simple como sonreírlealos niños – parece ayudar. Pero no todas las escuelas se adaptan as bien como la Escuela 79 lo ha hecho. Los aprendices de Ingles se están ‘deslizando por las grietas’? Para muchas escuelas, la inundación de niños inmigrantes que hablan una gama de idiomas, han dejadoaniños confundidos, maestros frustrados, calificaciones de exámenes decreciendoeincluso han etiquetadoaescuelas que tradicionalmente son altas en calificación con calificaciones F. De las 25 escuelas de Indiana con el mayor incremento en el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés desde el 2006, 13 de ellas o han visto sus calificaciones bajar de A-a-F o se han visto en aprietos ya que ese porcentaje ha aumentado. Las escuelas con un gran número de estudiantes aprendiendo inglés afrontan un triple desafío: deben de ayudaraesos niñosaque aprendan bienahablar y escribir inglés, adaptarseauna nueva cultura mientras que gradualmente empiecenasentirse más como Estadounidenses y prepararlos académicamente para la universidad o carreras. Pero defensores de comunidades inmigrantes temen que los no-nativo-hablantes de inglés se están deslizando por las grietas. Los niños aprendiendo inglés como-un-nuevo-idioma han sido empujados, durante la última década, para adaptarse cada vez más rápido y se espera que tomen el Examen Estatal de Indiana para Progreso Educacional (ISTEP por sus siglas en inglés) más pronto – en muchos casos, antes de que hayan aprendido el suficiente idioma para poder entender que es lo que les piden. Indiana requiere que todos los aprendices del idioma ingles tomen el ISTEP de matemáticas sin importar que tan recientemente hayan llegado de sus países de origen. Ellos reciben un año de indulto antes de que ellos tomen el examen de Ingles. Para muchos de ellos, ese no es simplemente tiempo suficiente para aprender bien el inglés para que los exámenes midan que es lo que saben, Akridge dijo. “Creo que necesitamos reconocer la verdad: toma de tresacinco años para aprender un idioma,” ella dijo. Oficiales estatales dicen que sus manos están atadas por la Ley federal Que-Ningún Niño-Se-Quede-Atrás, la cual requirió un repaso de como Indiana probóaaprendices del idioma Ingles en el 2007 y resultó en las líneas de tiempo de prueba más estrictas. La ley federal fue diseñada, en parte, para incentivar escuelasapasar más tiempo y atención en niños en riesgoareprobar. Las escuelas han respondidoala presión de hacer que esos niños pasen los exámenes asignandoamás especialistas en lenguaje. La Escuela Primaria Nora del Municipio de Perry, también fue clasificada dentro de las primeras 25 en el estado por su crecimiento en la inscripción de aprendices del idioma Ingles, ahora tiene tres maestros de Ingles-como-nuevo-idioma y cinco asistentes para suplementar aprendizaje en las aulas para sus 705 estudiantes. Estos es más que lo doble de lo que la escuela tenía cinco años atrás. La Escuela 79 tiene un personal de9maestros y asistentes quienes se especializan en enseñar Inglés-como-nuevo-idiomaasus 734 estudiantes. Pero eso cuesta dinero, los cuales no han acompañado los mandatos federales y estatales. Mientras que la inmigración crece, los fondos para el aprendizaje de Ingles disminuyen En el caso de Indiana, de hecho, ha ocurrido lo opuesto: la legislatura ha recortado asistencia extra para ayudar programas de enseñanzas de Ingles justo en el momento cuando las escuelas están teniendo problemas con un crecimiento explosivo de niños que los necesitan. El estado actualmente paga solo $87 por estudiante en asistencia extra para ayudaraaprendices del idioma Ingles, por debajo de aproximadamente el doble de hace una década. Simplemente no es suficiente dinero para apoyar el esfuerzo titánico de escuelas como la Escuela 79 o La Escuela Primaria Nora, dicen los educadores. Las escuelas no solo deben enseñaralos niños Ingles más sus otras materias, también deben ayudarasus niñosaadaptarse al desconcertante cambio de mudarseaEstados Unidos. Algunas veces, requisitos inquebrantables – como esos de los exámenes – pueden estorbar. Shawn Schlepp, una maestra de quinto grado de la escuela Nora, recalca como el darleauno de sus estudiantes el ISTEP de matemáticasasolo días después de haberse mudadoaE.U. erosionó una confianza tentativa que los dos habían comenzadoaconstruir. “Ella estaba sentada en esta mesa en este salón, y escogió los números del primer problema y los escribió en una pieza de papel,” Schlepp recuerda. “Me miró he hizo gestos. Ella simplemente quería saber qué hacer. Sumar? Restar? Pero no se me permitía decirle.” Después de unos minutos, la niña empezóallorar, dijo Schlepp. Esta conmovedora escena se repite muchas veces en escuelas con muchos estudiantes inmigrantes. Pero hay esperanza aun en esos momentos difíciles, como una historia de la Escuela 79 de Akridge lo demuestra. Era un estudiante de África que hablaba Frances que también se afrontó frente al examen ISTEP de matemáticas en su primer día de clases en la Escuela 79, Akridge recuerda. El también se frustró rápidamente y se soltó en llanto. Pero poco después, dijo Akridge, el niño empezóaadaptarse con asombrosa agilidadasu nuevo país, su nueva escuela y aprendiendo un nuevo idioma. “Podía ver que era muy inteligente,” ella dijo. La calidad de su trabajo escolar aumentó haciéndole obtener confianza. Para cuando tomó el ISTEP el año siguiente, él estaba en el cuadro de honor. Pasó. Los maestros siempre tienen que recordar que los aprendices del idioma ingles traen con ellos experiencias valiosas mucho muy diferentes que las de cualquier estudiante americano que pueda ser activo, no solo en sus propias vidas pero para que sus escuelas puedan aprender. “Viene con capital cultural,” dijo ella. “Las experiencias de sus países pueden ser transferidas para aprender aquí en los E.U.” ရွှေဥနဥနွှဥနဥနပြောင်းဝင်afရောက်afနေထိုငိုင်jfခြင်းက အင်ဒ်ဒီယီယားနားဖလစ်+fမြိုဥနဥနဥနဥနကိုအိုအသွငွင်afပြောင်းလဲaJစေသည့်အ့်အချိနိန်မ်မှာSm စာသင်afကျောင်းများလည်းအမီလီလိုကိုက်ရ်ရန်အ်အတွကွက်ရ်ရုနုန်းကန်afနေရပါသည် အင်ဒ်ဒီယီယားနားပြည်န်နယ်၏အလယ်ဗ်ဗဟိုသိုသည်အ်အင်္ဂင်္လလိပိပ်စ်စာသင်=fကြားသူမူများပေါက်ပ်ပွာ;သည့်အ့်အဓိကိကနေရာဖြစ်သ်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖွား မေရီယံ ခန်း Marium Khan က အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာစကားအသစ်တခုအဖြစ် စာသင်ခဲ့သည့်အချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ပြီးအခြားနိုင်ငံက ကလေးများကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမည် ဟုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။ ခန်း Khan ၏ပထမအလုပ်တလအတွင်းမှာပင် အခြားနိုင်ငံအသီးသီးက ကလေးများကိုသူတကယ်စာသင်ပေးရသည်။ သို့သော် သူက ဒီအင်ဒီယားနားဖလစ်မြို့ထဲမှာပင် မြို့၏အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိသော အမှတ်၇၉စာသင်ကျောင်းမှာစာသင်ပေးသည်။ ခန်း ကြုံတွေ့ရသလို အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်သောကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အခြားဘာသာရပ်များသင်ယူရန် ပြည်နယ် အစိုးရစာမေးပွဲအောင်ရန်နှင့်အမေရိကမှာနေထိုင်ရန်ဘ၀ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမြန်မြန်တတ် လာအောင် သင်ပေးရသည့်အခက်အခဲမျိုး အင်ဒီယားနားပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာများလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ ခန်း၏ပထမအလုပ်အစပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ သူဟာ အိုင်ယူပီယူအိုင်တက္ကသိုလ်မှ ဒီဇင်ဘာလမှာ ဘွဲ့ရပြီးနောက်တလအကြာ တွင် စာသင်ကျောင်းမှာအလုပ်စလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကြုံရာကျပန်းဖန်တီးဆောင်ရွက်မှုများစလုပ်ခဲ့ရပြီး။ သူကောင်းကောင်းတတ် ကျွမ်းသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအူရဒူဘာသာစကားနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိန္ဒူဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံး သုံးလို့မရပါ။ အမှတ် ၇၉ ကျောင်းမှာ စာသင်သောကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၇၃၀ ခန့် ဘာသာစကားအမျိုးအစားဒါဇင်ပေါင်းများစွာသုံးကြသော်လည်း သူတတ်သည့်ဘာသာစကားတမျိုးမှမပါပါ။ “ကျမအတွက်အခက်ဆုံးအုပ်စုက ပထမတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူမပြောခဲ့ပါသည်။ “သူတို့က ဘာသာ စကားပေါင်းစုံပြောကြပြီး အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်ပါ။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျင့်သားရဖို့သူတို့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်။” ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောနေထိုင်မှုသည် အင်ဒီယားနားဖလစ်မြို့ကို လျင်မြန်စွာအသွင်ပြောင်းလဲစေပြီး စာသင်ကျောင်းများအပေါ် ကြီးမား သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစပြီး စာသင်ကျောင်းများ၏လူဦးရေစာရင်းတင်ပြမှုအရ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၏စာသင်ကျောင်းသုံးပုံနှစ်ပုံက အင်္ဂ လိပ်စာကို ဘာသာစကားအသစ်တခုအနေဖြင့်သင်ယူသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာတာကို တွေ့ရသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ မေရီယံကောင်တီက အလယ်ဗဟိုမှာကျရောက်နေသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူလူဦးရေ အနည်းဆုံး၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာကို တွေ့ရသည့်ပြည်နယ်တွင်းစာ သင်ကျောင်း ၂၅ ကျောင်းအနက်၊ အင်ဒီယားနားဖလစ်ပြည်သူ့စာသင်ကျောင်းများနှင့်ဖယ်ရီမြို့စာသင်ကျောင်းငါးကျောင်းစီအပါအ ဝင်၊ စာသင်ကျောင်း ၁၄ ကျောင်းက မေရီယံကောင်တီမှာရှိပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး မေရီယံကောင်တီဒေသလိုက်စာသင်ကျောင်းများတက်ရောက်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူလူဦးရေ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ် ၁၃၀၀၀ ခန့်များလာတာကိုတွေ့ရသည်။ အဲဒီကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးက ဒေသတခုထဲရှိစာသင် ကျောင်းများမှာစုပြီးကျောင်းတက်လျှင်၊ ဒေသ ၁၁ ခုအနက် ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ နံပါတ် ၅ အများဆုံးအဆင့်မှာရှိသည့် ဝါရန်မြို့နယ်ကျောင်းထက် လူဦးရေပိုများလိမ့်မည်။ သို့သော် စာသင်ကျောင်းများမှ ကလေးများအင်္ဂလိပ်စာအမြန်သင်ရန်လိုအပ်မှုများနှင့်လုံးပန်းနေသည့်အချိန်မှာ အစိုးရက ဒီလိုအစီ အစဉ်မျိုးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောထောက်ပံ့မှုများကိုတဝက်ထက်ပိုပြီးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ခက်ခဲစွာရုန်းကန်နေ ရသောစာသင်ကျောင်းများအတွက် ကလေးများကိုထိရောက်စွာကူညီရန်အခက်အခဲပိုဖြစ်စေပြီး စာသင်ကျောင်းများရင်ဆိုင်နေရ သည့်အခက်အခဲများအပေါ်ထည့်မစဉ်းစားသည့်အပြင် တာဝန်ယူမှုစနစ်အရအပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် တရားမျှတမှုရှိမရှိ စသည့်မေး ခွန်းများထွက်လာပါသည်။ စာသင်ကျောင်းများက ပုံမှန်လုပ်ရပ်နှင့်မတူသောနည်းလမ်းများရှာရမှာကို လျင်မြန်စွာသိရှိခဲ့ရပြီး။ ဥပမာအနေဖြင့် ဖယ်ရီတောင်းရှစ်သည် မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏လူဦးရေအမြန်တိုးနှုန်းနှင့်လိုက်ဖက်အောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေး သည်။ အိုင်ဖီအက်စ်အင်ဒီယားနားဖလစ်ပြည်သူ့စာသင်ကျောင်းများသည် လက်တင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများစွာအတွက် အောင်မြင်မှုမရေမရာနှင့်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်မှာကြာပါပြီး။ သို့သော် အိမ်မှာစပိန်ဘာသာစကားတခုထဲမဟုတ်ပဲ အခြားဘာသာ စကားပြောသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများလာသဖြင့် ဒိစတြစ်ဒေသဆိုင်ရာအရာရှိများက ကလေးစာသင်ပေးသည့်နည်း လမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီး။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသည့်ကလေးဦးရေလျင်မြန်စွာများလာတာကို အမှတ်၇၉အိုင်ပီအက်စ်ကျောင်းလောက် သိသာထင် ရှားသောအခြားဥပမာမရှိပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှာ ထိုကဲ့သို့ကလေးမျိုးကိုအစိုးရစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ပြင်ဆင်ပေး သည့်နေရာမှာ အောင်မြင်မှုအရရှိဆုံးကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းသည့်ရလဒ်အတွက်ထူးခြားစွာစာသင်ခြင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမှတ်၇၉ကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာသည့်အချိန်မှာ ဂျွိုက်စ် အိတ်ခရစ်ဂ်ျ Joyce Akridge အနေဖြင့် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကပြောင်းလဲနေသည်ဟု သူသိရသည်။ အရင်က သူတွေ့ခဲ့ဘူးသည်။ အိတ်ခရစ်ဂ်ျအနေဖြင့် အမှတ်၇၉ကျောင်းမှာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၄၀ က စာသင်သည့်အလုပ် ကိုစလုပ်သည့်အချိန်မှာ အဲဒီအချိန်ကအများအားဖြင့်လူဖြူပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး ဘယ်တော့မှမထွက် ခွာခဲ့ပါ။ သူ့ကလေးများလည်း ဒီကျောင်းကိုတက်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ လူဖြူအများစုတက်နေသည့်ကျောင်းမှာ တခါတရံ လူမည်း လေးငါးယောက်သာရှိသည့်အုပ်စုကြားထဲမှာပါပါသည်။ ကျောင်းအုပ်အနေနှင့်သူပြန်ရောက်လာသည့်အခါ ကျောင်းက လူမည်းကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုကျောင်းအဖြစပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီး။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရသည့်ကျောင်းသားမရှိသလောက်ဖြစ်ပါသည်။ ၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းသည်။ ကျောင်းမှာ ဘာသာစကားဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ ခန့်ထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် အရာအားလုံးက နောက်ထပ်တခါ ပြောင်းလဲတော့မည်။ မြန်လဲမြန်ပါသည်။ သူ့အတွက်ဒုတိယနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အင်္ဂလိပ်စကားသင်ရန်လိုအပ်ပြီး အကူအ ညီလိုနေသည်ဟု အိတ်ခရစ်ဂ်ျသိရသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားကျောင်းများကို ကျောင်းဆရာဆရာမ များအဖွဲ့တဖွဲ့နှင့်အတူ တွေ့ဆုံပြီး အိုင်ယူပီယူအိုင်တက္ကသိုလ်မှာ ကလေးများကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူလက် မှတ်ပေးသည့်အတန်းစတင်ခဲ့သည်။ သူဟာ အဲလိုအရည်အချင်းရှိသည့်အိုင်ပီအက်စ်ကျောင်းအုပ်တယောက်တည်းသာဖြစ်နေသေးသည်။ “ပြသနာတရပ်အဖြစ်ကျမ မမြင်ပါဘူး”ဟု သူပြောပါသည်။ “ကျမလက်လှမ်းမီချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအုပ်စုတစုအဖြစ်ကျမမြင်ပါတယ်။ လူတွေကို သူတို့အသုံးပြုလို့ရမဲ့လုပ်ရပ်ကောင်းလေးငါးမျိုးပေးလိုက်ရင် တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့လာပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတာ ပိုပြီးနည်းလမ်းရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်။” အိတ်ခရစ်ဂ်ျနှင့်သူ့အဖွဲ့က ကလေးအင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်မည့်နည်းမျိုးစုံစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာ စာသင်ခန်း ထဲမှာရှိသည့်ပစ္စည်းများကို ကပ်ခွာစာရွက်လေးများအပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အမည်တပ်ပေးသည်။ ဥပမာ ထိုင်ခုံ၊ စားပွဲ၊ သင် ပုန်းကြီး စသည့်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။ အိတ်ခရစ်ဂ်ျအနေဖြင့် ဘာသာစကားအသစ်တခုသင်ယူခြင်းဟာ လုပ်ငန်းကြီးတခုဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုပေးရန်လိုသည်ဟု သူအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အတွက် စာသင်ချိန်များများရအောင်သူကြိုးစားပြီးဖန်တီးပေးသည်။ နေ့ လည်စာစားသည့်အခန်းပါပါဝင်သည်။ ကလေးများအစားအစာသွားယူပြီးစစားသည့်အချိန်နောက်ပိုင်းမှာ အိတ်ခရစ်ဂ်ျက ကစားချိန်နှင့်အတူ ကျောင်းအုပ်က မိုက်ခွက် ထဲမှာဦးဆောင်ပြီး လက်ခုပ်တီးခြင်း အမေးအဖြေစကားပြောခြင်း စသည့်ပျော်စရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ပေးသည်။ လက်ခုပ်တီးခြင်းသည် အစဉ်လိုက်ဆင်တူပုံများကိုမှတ်မိရန်သင်ခန်းစာငယ်လေးတခုဖြစ်သည်။ အမေးအဖြေမှာမေးသည့်မေးခွန်းများ သည် စာလုံးများနှင့်ပတ်သက်သည်။ “ကျမကျောင်းတက်တဲ့အချိန်တုန်းက စာသင်တာရေပိုက်နဲ့တူတယ်” ဟု သူဆိုပါသည်။ “ရေဖြန်းပေးရုံပဲ၊ လူတိုင်းက ရေပိုက်ထဲမှ ထွက်လာတဲ့ရေစိုသလို စာသင်ယူကြတယ်။ အခုတော့၊ ပုံမှန်ချိန်ပြီးဖြန်းရသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကလေးတချို့က ရေနည်းနည်းလေး ပိုဖြန်းပေးဖို့လိုတယ်။” ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စာသင်ကျောင်းကရုန်းကန်နေသည်။ F အဖြစ် နှစ်နှစ်မအောင်မြင်သည့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကျောင်းမှာဘာသာစကားသင်ယူသူနှင့်ပြည့်ကြပ်နေသည့်အချိန် – အခုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ၏ထက်ဝက်ထက်ပိုများ နေသည့်အချိန်မှာ – အစိုးရစာမေးပွဲအောင်မှတ်ကောင်းလာတာတွေ့ရသည်။ အခုအမှတ်၇၉ကျောင်းက ငါးနှစ်ဆက်တိုက် A အဖြစ်အောင်မှတ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းရှိသည်ဟုအစိုးရသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အလွယ်တကူမရခဲ့ပါ။ ဥပမာ ခန်း Khan က “လူသစ်”အတွက် အထူးအတန်းမှာစာသင်ပေးသည်။ စာသင်နှစ် နှစ်တဝက်မှရောက်လာသောရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်သူများ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနည်းနည်းသို့မဟုတ်လုံး၀မပြောတတ်သူများကို စာသင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးခင်ကသောကြာနေ့တမနက်မှာ ပထမအတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများနှင့် “ကျနုပ်တို့၊” “ထို၊” “ရှိသည်ဖြစ်သည်၊” စသည့်အခြေခံစာလုံးများကို မိနစ် ၉၀ ကြာသင်ပေးသည်။ သူတို့က တိုက်ကြီးသုံးတိုက်ဖြစ်သည့် အာဖ ရိကတိုက်၊ တောင်အမေရိကတိုက်နှင့်အာရှတိုက်များမှနိုင်ငံခြောက်နိုင်ငံကရောက်လာကြသူများဖြစ်ပါသည်။ “နေရာပေါင်းစုံကလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများများနဲ့တခါမှကျမမကြုံတွေ့ဖူးဘူး” ဟု ခန်းကပြောပါသည်။ “သူတို့ဘာပြော လဲကိုယ်မသိ။ အခြေခံအက္ခရာနဲ့အသံထွက်က စသင်ပေးရတယ်။” လူသစ်အတန်းသည် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများ အမေရိကမှာဘ၀ထူထောင်နေထိုင်ရာတွင် အ ထောက်အကူဖြစ်ရန်အတွက် အိတ်ခရစ်ဂ်ျနှင့်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ဖန်တီးမှုတခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် အောင်မြင် မှုရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုကျောင်းကအသုံးချခြင်းဖြင့် သူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ ကလေးကို ရိုးရိုးလေး ပြုံးပြတာကအစ စာစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုနေရာမှန်အသုံးချသလို ရှုပ်ထွေးသောတွေးခေါ်ဆောင်ရွက်မှုများလည်း အကျိုးရှိပါသည်။ သို့သော် စာသင်ကျောင်းတိုင်းက အမှတ်၇၉ကျောင်းလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်နိုင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘသာစကားသင်ယူသူများသည် ‘လျစ်လျူရှုမှုကြုံတွေ့နေရသလား’ ကျောင်းအတော်များများမှာ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကလေးများလွမ်းမိုးပြီး ဘာသာစကားမျိုးစုံပြောကြသည့်အတွက် ကလေးများကိုစိတ်ရှုပ်စေသည်၊ ဆရာဆရာမများကိုအားမလိုအားမရဖြစ်စေသည်၊ စာမေးပွဲအောင်မှတ်များကျဆင်းစေပြီး အစဉ် အလာအရအမှတ်ကောင်းသည့်အချို့ကျောင်းများမှာ F အဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရသော်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးထိုးတက်လာသည့်အင်ဒီ ယားနားကျောင်း၂၅ကျောင်းအနက် ၁၃ ကျောင်းက A မှ F သို့အမှတ်အဆင့်ကျဆင်းသွားတာကြုံရသည်၊ သို့မဟုတ် ရာခိုင်နှုန်း များလာသည်နှင့်အမျှ အမှတ်အဆင့်ရပ်တန့်နေသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ရသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများသည့်ကျောင်းများအတွက်အခက်အခဲသုံးဆကြုံတွေ့ရသည်။ သူတို့က အဲဒီကလေးများကို အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖတ်တတ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်သို့အ သွင်ပြောင်းပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအမေရိကန်သားလိုခံယူလာမည့်အတွက်လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင် အတွက်ပြင်ဆင်ရာမှာလည်းကောင်း၊ စသည့်ကိစ္စများကို အဲဒီကျောင်းများကကူညီပေးရသည်။ သို့သော် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အားပေးကူညီသူများက ဒေသခံအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ် သူများသည် လျစ်လျူရှုခံရမှာကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာစကားအသစ်တခုအနေဖြင့်သင်ယူနေသောကလေးများကို လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း မြန်မြန်ပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်ရန်နှင့် ISTEP အိုင်းစတက်အင်ဒီယားနားတပြည်နယ်လုံးပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုစာမေးပွဲကို စောစောဖြေဆိုရန်အတွက် ဖိအားပေးခံရသည်။ အများအားဖြင့် ဘာသာစကားလုံလောက်စွာမသင်ရသေးသည့်အတွက် သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ပါ။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူများအားလုံးကို သူတို့နိုင်ငံမှဒီနိုင်ငံကို ရောက်လာတာကြာသည်ဖြစ်စေ မကြာသည်ဖြစ်စေ၊ အိုင်းစတက်သင်္ချာစာမေးပွဲမဖြေမနေရသတ်မှတ်ထားသည်။ အင်္ဂလိပ်စာမေး ပွဲကိုဖြေဆိုရန် တနှစ်ရွှေ့ဆိုင်းထားပေးသည်။ သူတို့အတော်များများအတွက် အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာသူတို့၏အသိဥာဏ်တိုင်းထွာသည့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အင်္ဂလိပ်စာကောင်း ကောင်းသင်မည့်အချိန်မလုံလောက်ပါဟု အိတ်ခရစ်ဂ်ျကပြောပါသည်။ “တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုအသိအမှတ်ပြုဘို့လိုမယ်လို့ကျမထင်တယ်၊ ဘာသာစကားတခုသင်ဘို့အတွက် သုံးနှစ်ကနေငါးနှစ်ကြာ ပါတယ်” ဟုသူပြောခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအရာရှိများက ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ ဘယ်ကလေးမှမကျန်ခဲ့ရဥပဒေအရ သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုဆိုပါသည်။ ဒီကိစ္စကိုပြင်ချင်လျှင် ၂၀၀၇ မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကို အင်ဒီယားနားပြည်နည်က စာမေးပွဲစစ်ဆေးပုံနှင့်စာမေးပွဲဖြေရန်အချိန် ပိုပြီးတင်းကြပ်သွားပုံများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးပြီ။ အချို့ရည်ရွယ်ချက်များက ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ရှိသည့်ကလေးများအတွက် အချိန်ပိုပေးပြီး ပိုဂရုစိုက်ရန်အတွက် စာသင်ကျောင်းများကိုတွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီကလေးများစာမေးပွဲအောင်ရမည်ဆိုသည့်ဖိအားများ အပေါ် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်ပိုခန့်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းများကတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်၏ Nora နော်ရာမူလတန်းကျောင်းလည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်သူစာရင်းဝင်များလာသည့်ပြည်နယ် အတွင်းထိတ်တန်းကျောင်း၂၅ ကျောင်းထဲမှာပါပါသည်။ အခုအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုဘာသာစကားအသစ်အဖြစ်သင်ပေးသည့်ဆရာ ဆရာမသုံးယောက်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသား ၇၀၅ ယောက်ရှိသည့်စာသင်ခန်းများအတွက် လက်ထောက်ဆရာဆရာမငါး ယောက်နှင့်ဖြည့်စွက်ပေးရသည်။ လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အချိန်ထက်အဲဒီကျောင်းမှာနှစ်ဆပိုများလာသည်။ အမှတ်၇၉ကျောင်းမှာ ဝန် ထမ်းဆရာဆရာမနှင့်လက်ထောက်၊ အားလုံးကိုးယောက်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၇၃၄ ယောက်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာအသစ်တရပ်အနေဖြင့်အထူးသင်ပေးသည်။ သို့သော် အဲဒါဟာကုန်ကျငွေရှိပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အစိုးရကဥပဒေပြဌာန်းပြီးကုန်ကျစရိတ်မပေးပါ။ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူများလာသည်နှင့်အမျှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေနည်းလာသည် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ စာသင်ကျောင်းများက အကူအညီလိုအပ်သည့်ကလေးဦးရေများလာခြင်းနှင့် ရုန်းကန်ရသည့်အချိန်မှာပင် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်သည့်အစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးအပိုများကိုဖြတ် လိုက်သည်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အစိုးရက အင်္ဂလိပ်စာသင်သူအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးကို ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်မှာ ၈၇ ဒေါ်လာသာ ပေးသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အချိန်ကထက် တဝက်လောက်လျော့သွားသည်။ ဒါဟာ အမှတ်၇၉ကျောင်း သို့မဟုတ်နော်ရာမူလ တန်းကျောင်းတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်ရန်ငွေမလုံလောက်ပါဟု ပညာသင်ကြားပို့ချသူများကပြောပါသည်။ စာသင်ကျောင်းများသည် ကလေးများကိုအင်္ဂလိပ်စာနှင့်အခြားဘာသာရပ်များသင်ပေးရုံသာမက ကလေးများကိုအမေရိကသို့ရွှေ့ ပြောင်းလာခြင်းဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အလိုက်သင့်အောင်ကူညီပေးရသည်။ တခါတရံမှာ၊ စာမေးပွဲများလို-အတည်တကျဖြစ်သောလိုက်နာဖြည့်စည်းရမည့်အရာများဟာ အဟန့်အတားဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ နော်ရာမှာငါးတန်းဆရာမဖြစ်သည့် ရှောန် ရှလက်ဖ် Shawn Schlepp သည် ရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကကိုရောက်လာသည့် ကျောင်းသူတယောက်ကို အိုင်းစတက်သင်္ချာစာမေးပွဲစစ်သည့်အတွက် သူတို့နှစ်ဘက်လုံးစတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ယုံကြည်မှုအ စမ်းပျက်စီးသွားခဲ့တာကို သူမှတ်မိသည်။ “သူဟာ ဒီအခန်းထဲကဒီခုံမှာထိုင်နေတယ်၊ မေးခွန်းအမှတ်စဉ်များထဲကတခုသူရွေးလိုက်ပြီးစာရွက်လေးတရွက်အပေါ်မှာရေးချလိုက် တယ်” ဟု ရှလက်ဖ်ကပြောပြသည်။ “သူကကျမကိုကြည့်ပြီးလက်နဲ့လက်ဟန်အမူအရာပြခဲ့တယ်။ သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ရုံ သက်သက်ပါ၊ ပေါင်းရမလား၊ နှုတ်ရမလား၊ ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့ကိုပြောပြခွင့်မရှိပါ။” လေးငါးမိနစ်နောက်အကြာမှာ၊ အဲဒီကလေးမက စပြီးငိုပါတော့သည်ဟု ရှလက်ဖ်ပြောပြပါသည်။ ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများက အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်တွေ့ကြရသည်။ သို့သော် အိတ်ခရစ်ဂ်ျတင်ပြသွားသည့်အမှတ်၇၉ကျောင်းပုံပြင်အဖြစ်အပျက်တခုအရ ခက်ခဲသည့်အချိန်ကာလများအထဲမှာပင် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးသည်။ ပြင်သစ်စကားပြောသည့်အာဖရိနိုင်ငံကကျောင်းသားတယောက်လည်း အမှတ်၇၉ကျောင်းကိုပထမဆုံးတက်ရောက်သည့်နေ့၌ အိုင်းစတက်သင်္ချာစာမေးပွဲအရှေ့မှာကြေကွဲပါတော့သည်ဟု အိတ်ခရစ်ဂ်ျကပြောပြသည်။ ဆက်လက်ပြီးသူဟာ လျင်မြန်စွာစိတ်မ ကျေမနဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ထွက်ပါတော့သည်။ သို့သော်၊ အဲဒီနောက်မကြာမီမှာ အိတ်ခရစ်ဂ်ျပြောပြချက်အရ အဲဒီယောက်ျားလေးက သူ၏နိုင်ငံသစ် ကျောင်းသစ်နှင့်ဘာသာ စကားအသစ်သင်ယူရာမှာ အံ့ဩောရလောက်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလျင်မြန်စွာလိုက်လုပ်ခဲ့သည်။ “သူကအလွန်တော်ပါတယ်လို့ကျမပြောနိုင်တယ်”ဟု သူပြောပြခဲ့ပါသည်။ သူ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်မှုရရှိလာတာနှင့်အမျှ အတန်းထဲစာသင်သည့်အရည်အချင်းထိုးတက်ပါတော့သည်။ နောက် တနှစ်အိုင်းစတက်ပြန်ဖြေသည့်အချိန်မှာ သူက ဂုဏ်ထူးအထဲမှာပါခဲ့သည်။ သူစာမေးပွဲအောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဆရာဆရာမများက အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများဟာ သူတို့နှင့်အတူပါလာသည့် အကျိုးရှိသောအတွေ့အကြုံများသည် သာမန် အမေရိကန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများထက်ကွာခြားပြီး သူတို့၏ဘ၀သာမက ကျောင်းအတွက်ပါသင်ခန်းစာယူနိုင်သည့်အရာအ ဖြစ်အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ “သူတို့က ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့လာကြတယ်” ဟု သူပြောခဲ့သည်။ “သူတို့နိုင်ငံမှအတွေ့အကြုံများကို အမေရိကမှာသင်ယူလေ့လာစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။” Chalkbeat isanonprofit news site covering educational change in public schools.https://in.chalkbeat.org/2015/4/19/21113618/as-immigration-reshapes-indianapolis-schools-struggle-to-keep-up